Vharuvhu CO-YAKADZIDZWA kurongedza, kutsva kuchengetedza chishandiso!
ne admin pane 21-10-13
Vharuvhu co-extrude kurongedza ndeye yenhau yezvinhu kupakata tekinoroji, iri mukurumbira kwazvo mune yepasirese chikafu chiputuru indasitiri. Vharuvhu co-extrude kurongedza inowanzo kuverengerwa netarairesi uye mapurasitiki maficha. Maitiro ekuumbiridza kurongedza ndee: Iyo pa ...
Nei muchina wako wekuputira muchina usinga pombwe zvine simba
Kana yako yemuchina yekupakata isina chinetso chakasimba chekupomba, zvinogona kunge zviri nekuti nguva yekupomba yakaiswa ipfupi, kana nekuti mashandiro epombi yekutsvaira haasviki pamwero uye modhi haina kusarudzwa nemazvo. Ndezvipi zvimwe zvinhu zvinotungamira ...
Sarudzo yemhepo mbichana bhegi
Mhepo yekoramu bhegi irudzi nyowani rwekupakata zvigadzirwa, kuburikidza neCTI, SGS, EU SVIRA isiri-chepfu bvunzo certification, ndiyo yazvino kukwizirira, kuvhunduka-kusagadzikana, kuzadza kuputira zvinhu, iko kukura kukuru mu21st century yekupakata indasitiri, iyo kushandiswa kwechisikigo mhepo-fi ...
Kunzwisisa bhegi remhepo pamwe newe
ne admin pane 21-09-10
Pfupiso sumo: Mhepo bhuru bhegi, inozivikanwawo seyakakwenenzverwa yemhepo bhegi bhegi, inflatable bhegi, bubble ikholamu bhegi, ikholamu inflatable bhegi, iri mhando nyowani yekupakira zvinhu uchishandisa chaiwo mhepo yekuzadza muzana ramakore rechi21. Yakanyatso kuputirwa mweya ikholamu cushioning chengetedza ...
Mashandisiro aungaita chikafu chakakodzera chiputira mabhegi
Chikafu chekuputira mabhegi ekushandisa anoshandisa chirevo chekubvisa okisijeni kunyatso kudzivirira chikafu chinoparara, chengetedza ruvara rwayo, kunhuwirira, kuravira uye kukosha kwehutano hwechikamu. Muindasitiri yezvikafu inoshandiswa zvakanyanya, saka, mashandisiro ekushandisa mabhegi echikafu akarongeka? 1. Stora ...
Hauzive nezve yakakwira barriers chikafu kurongedza firimu?
Chiregedza. Yixing boya-kurongedza Co, Ltd. inokupa iwe yakajeka sumo. Iyo yepasi kudiwa kwepurasitiki firimu iri kukura, kunyanya munyika dzichiri kusimukira, iyo yekuda yekukura mwero inokurumidza, iyo yekupakata fomu kubva kuomarara kurongedza kune inochinjika kurongedza ndeimwe yeiyo th ...
Yakakurumbira Maitiro e co-extrude kurongedza
Kana tichitaura nezve co-extrude firimu zvatiri kureva? Iyo firimu yatinoshandisa inogadzirwa sei? Chikafu chekuputira firimu chinoitwa nemaitiro maviri: Co-extrude uye Lamination. Nhasi tinonyanya kutaura nezve co-extruded firimu. Pane matatu akasiyana maitiro e co-extrusion: furidza m ...
Iko kukosha kwemabhegi emagetsi muhupenyu
Vacuum bhegi kuwedzera kudzvinyirira kukura uye kubereka kwehutachiona, rimwe basa rakakosha kudzivirira kusanganiswa kwechikafu, nekuti mafuta negirizi chikafu chine huwandu hwakawanda hweasaturated fatty acids, iro basa reoksijeni uye oxidation, kuitira kuti chikafu chinonaka yakaipa, inodzikira ...
Yakakwirira yezvipenga mabhegi musika uye zvazvino maitiro
Kwemakore achangopfuura kukura kwemabhagi makuru ekudzivirira uye musika wemafirimu wakwezva kutarisisa kwakawanda pasirese. Yepamusoro notch yakakwira yekudzivirira masaga kambani munyika: Amcor emBemis 、 Yakavharwa Mhepo ……… Mhando dzakasiyana dzemabhegi ekudzivirira: Nylon, EVOH, Pepa / Aluminium, inoshanduka co-extr ...
Bhegi inotsvaira bhegi pane kugadzirwa kwakawanda
ne admin pane 21-07-02
"Chinopedzwa nemweya" zvinoreva kugona kwezvinhu kuti zviparadzike (kuora) nekuita kwehutachiona-hwakadai sehutachiona kana fungi yehupenyu (iine kana isina oxygen) uchinge uchinge wakakomberedzwa nemamiriro ekunze. Iko hakuna kukuvara kwezvakatipoteredza panguva ye ...
Vacuum Ganda Packaging
Vacuum Skin Packaging (VSP) iri kukurumidza kuve yekuenda kumhinduro yekuwedzera pasherefu hupenyu hwezvigadzirwa zvekudya, zvinosanganisira nyama nyowani uye dzakagadziriswa, huku uye hove dzegungwa, chikafu chakagadzirira-kudya, zvigadzirwa zvitsva uye chizi. Kugadzira package yeVSP, yakanyatsogadzirirwa pamusoro chisimbiso ...